Jose Mourinho Oo Si Layaableh Dhulka U Jiid-Jiiday Frank de Boer Oo Hore Mourinho Ugu Eedeyay Qaabka Uu Ula Dhaqmo Marcus Rashford. – GOOL24.NET
Jose Mourinho Oo Si Layaableh Dhulka U Jiid-Jiiday Frank de Boer Oo Hore Mourinho Ugu Eedeyay Qaabka Uu Ula Dhaqmo Marcus Rashford.
Waxa uu Jose Mourinho sida wayn caanka ugu yahay waxaa ugu wayn laba arimood oo kala ah qaab difaacashada uu ku ciyaaro iyo sida muranka xoogani ku jiro ee uu saxaafada uga hor weeraro shaqsiyaadka ay kubbada cagta isku af-garan waayaan. Jose Mourinho ayaa weeraro afka ah ku soo qaaday tababarayaal, ciyaartoy, shaqaale caafimaad, carruurta kubbada soo qabata iyo xataa maamulada kubbada cagta ee dalalkii uu ka soo shaqeeyay ama maamulada FIFA iyo UEFA.
Laakiin dhirbaacadii ugu danbaysay ee Jose Mourinho ayaa ku dhacday macalinka ree Holland ee Frank de Boer kaas oo dhawaan Jose Mourinho ku eedeeyay qaabka uu ula dhaqmo da’yarka xulka qaranka England iyo kooxda Manchester United ee Marcus Rashford kaas oo kulankii Liverpool laba gool ka dhaliyay markii fursad la siiyay.
Jose Mourinho ayaan ahayn macalin ka leexda nooca erayada uu u xulanayo shaqsi uu weerar ku qaadayo ama uu iskaga jawaabayo, waxaana la xusuustaa erayo khaas ahaa oo uu Antonio Conte ugu weeraray in kulamo uu sii go’aamiyay lagu ganaaxay.
Laakiin markan erayada kooban ee uu ku duray Frank de Boer ayaa ah kuwo uu si wayn u soo xushay isla markaana macalinka ree Holland boog xun ku ah isaga oo ku sifeeyay tababarihii ugu liitay ee taariikhda premier League soo maray wuxuuna erayo kooban ku soo ku soo qaatay wixii uu Frank de Boer ka qabtay Crystal Palace.
Jose Mourinho oo aan waxba ula hadhin Frank de Boer isla markaana uga jawaabaya eedaymihii uu ugu soo jeediyay Rashford ayaa yidhi: “Waxaan akhriyay odhaaho laga soo qaaday tababaraha taariikhda Premier League ugu xun ee Frank de Boer- Todoba kulan, todoba guuldaro, ebar gool”. ayuu Mourinho saxaafada ka hor sheegay ka hor kulanka Sevilla.
Intaa kadib Mourinho ayaa tixraacay erayadii Frank de Boer uu ka sheegay Marcus Rashfrod isaga oo waliba qaab digasho ah u sii duray wuxuuna yidhi: “Isagu waxa uu sheegayaa in Marcus Rashford ayna u fiicnayn in aniga oo kale aan tababaro, sababtoo ah aniga waxa iigu muhiimsani waa in aan guulaysto”.
Jose Mourinho ayaa sheegay in haddii Frank de Boer uu macalin u noqon lahaa Marcus Rashford in uu bari lahaa sida kulamada loo guuldaryasto wuxuuna yidhi: “Haddii uu isaga tababari lahaa Frank, waxa uu isagu baran lahaa sida loo guuldaraysto, sababtoo ah isagu kulan kastaba wuu soo guuldaraystay”.